Nolol Noocee ah Ayaad Rajeynaysaa Guurka Kadib? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Miski Cabdinuur Salal — August 16, 2020
Cali waa nin dhalinyaro ah oo dhammeyey daraasadda Jaamcadda, waxa uu ka shaqeyaa mid kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ee Dalka. Waxa uu garab siyaa waalidkii, sidoo kale waxa uu walaalihii ka bixiyaa qarashaadka waxbarshadda. Cali caawinta kaso-kow dabeecad ahaan waa mid dhaqankiisa addagyahay, amaradiisana ay kulul yihiin.
Cali waxa uu iskula hadlay in uu joogo waqtigii uu guursan lahaa, waxa ay is barteen gabar dhammeysay Dugsiga sare, aad ayey ugu faraxday inay barato wiil Jaamici ah, oo shaqeysto, haggaag iyo howraarsan ayey tiri Raxmo oo ahayd gabadha ey Cali isbarteen dhawaanahaan, waxa ay qalbigeeda kula hadashay sida ay u nasiib badan tahay, ayada oo u riyaaqsan Cali.
Marka ay gabdha bilawdo in ay qaan gaarto, waxay yeelanaysaa dareemo xoogan waxayna bilaabaysaa in ay uga hadasho waxyaabaha ku saabsan xiriirada jacaylka ah si gooni ah. Jirkeeda iyo hormoonadeeda waa kuwo isbedelaya una u koraya si dhakhso ah inta lagu guda jiro marxaladan.
Raxmo waxa ay reerkooda ka aheyd yaraan waliba kaligeed ayey gabar u aheyd reerka, walaalaheeda aad ayey u jeclaayeen, aadna waa loo koolkoolin jirey, wax waliba ay jeceshay iyo halkii ay rabto si farxad ku dheehan tahay bay ula wadaagi jirtay, reerkeeda kuwaas oo garab u ahaa xilli waliba.
Waa gabar lagu koriyey jaceyl, ixtiraam, waxa ayna dareen saneyd guriga in ay muhiim ka tahay, Inkastoo ay da’ahaan yareyd, haddana waxay aheyd gabar aad u aqli badan.
Inta aysan guursan kahor waxa ay arki jirtay lamaane isu faraxsan, lamaane wada socda, waxa ayna ku riyoon jirtay mar un in ey aragto iyada iyo Cali oo sidaas oo kale ah.
Sheeko dheer, isfahan kadib waxa ay go’aansadeen in Cali iyo Raxmo nolosha ku midoobaan, waaalidkoodna waa ay ka aqbaleen arintaas, Alalaaskii iyo farxadii ayaa isku daba dhacday, Raxmo oo faraxsan ayaana usoo hoyatay guriga Seygeeda.
Mudo ka dib Cali waxa uu lasoo baxay dabeecado qalafsan, ad-adeega iyo gacan qaad, Raxmo aad ayey ula yaabtay dabeecdahaan, arintaana waxa ay ku abuurtay cabsi aad u badan, taasoo ay awood u yeellan wayday xataa in ey soo bandhigto fikradaheeda.
Cali marka guriga uu soo galo waxaad modaa inuu soo gallay taliye ciidan, guud ahaan waxa la hakiyaa howlahii la qabanaayey, waxa hoos loo dhigaa hadalada,waxa meesha ka baxo farxadda guriga, jawigana waxa uu isku badalaa, mid cabsi ama dhuumashaal lagu jiro.
Bal waayahay!! Aqristoow Guurka ka dib noloshee ayaad rabtaa inaad ku noolato, tani waa qiso dhacday.
Ma ahi qabiir arimaha guurka, balse waxaan qalinka u qaatay si aan Bulshadeyda ula wadaago xaaldaha jira oo loo baahan yahay in wax laga badalo.
Tusaalle: Marwo Ababa G/sillaase iyo Seygeeda Gabre Kiristos waxay isqabeen ama ay noolal wadaag ahaayeen 50 sano. Dhawaanna waxay xuseen sanad guuradii 50aad ee guurkooda ka soo wareegtay iyada oo munaasabaddaasina ay ka soo qayb galeen 9 carruur oo ay dhaleen iyo 17 carruur oo ay carruurtooda sii dhaleen.
Waxayna qoysaskaasi nus qarniga noolasha ku mideysnaa ay sheegayaan iney muddo intaa dhan ay wada noolaadaan ay ugu wacneed “Samir iyo Iisu dulqaadasho”.
“Labada qof ee isqaba ama wada nool midkood inuu khalad ka dhaca waa lagama maarmaan balse iney khaladka dhacay si deggan ay u xalliyaan ayaa u horseedaya iney noolal farxad leh ay ku noolaadaan” ayey tiri Marwo Ababa.
Bariyahan dambana waxaa aad u badan qoysas wada nool oo aan aarimaha qoyskooda ka wada hadli karin, kuwa u wada nool carruurta iney wada korsadaan oo keli ah, ama aan kalsooni isku qabin. Guurka waa in labada shaqsiba ay dareemaan xasilooni jaceyl iyo amni. Ogowse aqoon waliba aad barato, haddii ey naftaada karreebin dabeecadda qalafsan ma noqoneyso, aqoontu waa tii qofka dabeecadihiisa badasha oo dadka kasoo saarto shaqsiyad cajiib ah.
Guurka marka aad galeyso qorshee sida aad rabto in aad u noolato.
Gurigaaga haka badal naado guryaha kale.
Habla-dhaqan kaaga wanaaji, ilaali qalbiga laamanhaaga, sababna ha u noqon in uu Xaaskaaga/Ninkaaga isku buuq uu ku dhaco, ama uu ka shalaayo inuu guursaday.
Noloshadana ka yeello mid is-caawin iyo kalgaceylk ku dhisan.
Tags: Noloshee Ayaad Rabtaa Guurka Ka Dib In Aad Ku Noolaato?
Next post Farriintan Macalinka Qur'aanka iga Gaadhsiiya!
Previous post Xariirka Imaraatka iyo Israa'iil: Maalin Kale oo Mugdi leh oo Loogu Talagalay Reer Falastiin